SAP S/4 Hana – IT4A
ERP, SAP, Uncategorized
ERP system တစ္ခုကို ဘယ္လိုစတင်ရြေးခ်ယ် အသုံးျပုမလဲ ❓❓
မိမိတို့ စီးပြားရေးလုပ်ငန်းအတြက် ERP system တစ္ခု စတင်အသုံးျပုလိုလွ်င်ျဖစ်စေ ၊ လက်ရွိ ERP system ကိုေျပာင်းလဲအသုံးျပုလိုလွ်င်ျဖစ်စေ system ၁ခုကို သေခ်ာ စ ဉ်းစားရြေးခ်ယ္ဖို့ လိုအပ္လာပါပြီ..
ကမ႓ာ့အဆင့်မွီထိုးဖောက်နိုင်သော ကုမ္ပဏီတစ္ခုျဖစ္လာစေရန် ၊ နေရာဒေသအေတ္မာ်ားမ်ားကို ျဖန့်က်က်နေရာယူနိုင်သော အဖြဲ့အစည်းတခု ျဖစ္လာစေရန် Cloud ကိုအျေခခံထားသည့် ERP စနစ္တစ္ခု ျပုလုပ်နိုင်သော Digital နည်းပညာကို သင့်လုပ်ငန်းတြင် Strategy တစ္ခုအေနျဖင့် ျပင္ဆင္ထားသင့်ပါသည်..
ယခုလို ဒစ္ဂ်စ္တယ် နည်းပညာခေတ္မွာ information မ်ားကို အခ်ိန်နွင့် တျေပးညီ သြက္လက်ျမန္ဆန္စြာ accurate ျပုလုပ်နိုင်ရန် နည်းပညာအသစ်တြေကို အက်ိုးရွိစြာ အသုံးခ်နိုင်ရန် Operation ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်သော software ကိုသာ အသုံးျပုသင့်ပါတယ်
ထိုကဲ့သို့သော နည်းပညာမ်ားအတြက် SAP ERP စနစ္ထဲမွ SAP S/4 Hana ကိုအသုံးျပုမယ္ဆိုလွ်င် သင့်လုပ်ငန်းအတြက် အေကာင်းဆုံး ျဖစ္လာမွာပါ..
SAP S/4 Hana ရဲ့ Business Benefits မ်ားကေတာ့
✅ Empower to maximize new emerging technologies အသစ်ျဖစ်ပေါ်ေျပာင်းလဲလာသော နည်းပညာမ်ား ကို အျပည့်အဝ အသုံးခ်နိုင်စျေခင်း
✅ Increased efficiency via automation အလိုအေလ်ွာက္တြက္ခ်က္လုပ်ဆောင်ပျေးခင်းမ်ားျဖင့် လုပ်ငန်းခြင်အတြင်းထိရောက္စြာအက်ိုးျဖစ္ထြန်းစျေခင်း
✅ Efficient collaboration ထိရောက်သော ပူပေါင်းဆောငြ်ရက္မှုရရွိစျေခင်း
✅ Increased productivity ကုန္ထုတ္လုပ္မှု တက္လာစျေခင်း
✅ IT cost savings သတင်းအခ်က်အလက္မ်ားအတြက် ကုန္က်စရိတ္မ်ား သက်သာစျေခင်း
📌 သင့်လုပ်ငန်းတြင် ယခုလက်ရွိ SAP software ကို installation ျပုလုပ်သုံးစြဲနေပါသလား?
📌 ယခုလက်ရွိ software တြင် အသုံးျပုလိုသော features တြေကို heavily customized ျပုလုပ်နေရပါသလား?
📌 Customization အတြက္လုပ်ငန်း ယွ ဉ်ပြိုင်အားသာမှုတြေရယူ လိုခ်င္ပါသလား ?
☑️ Greenfield installation နွင့် S/4Hana on any cloud provider မ်ားသည် အေကာင်းဆုံးကိုမွ ရြေးခ်ယ္လိုသော customers မ်ားအတြက် en-of-lifecycle SAP installation အတြက်အသင့်တ္ဆောုံး ျဖစ္ပါတယ်
☑️ Heavily customized installation မျပုလုပ္လိုသော customers မ်ားအတြက် SAP မွ SaaS model ( Software asaService) model သည္လည်း အသင့်တ္ဆောုံးရြေးခ်ယ္မှု ျဖစ္ပါတယ်
☑️ Customized installation ျပုလုပ္လိုသော companies မ်ားအတြက် SAP S/4 Hana မွ PaaS ( Platform asaService) သည် best option ျဖစ္ပါလိမ့်မည်
💯💻 လူကြီးမင်းတို့အေနျဖင့် အထက္ပါ Solution နွင့် Services မ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားပြီး အေသးစိတ် အခ်က်အလက္မ်ားကိုဆြေးနြေးလိုပါက IT4a (Information Technology for All) company သို့ ယခုပင္စုံစမ်းမျေးမန်းနိုင္ပါသည်.. လူကြီးမင်း၏လုပ်ငန်းဆီသို့ လာရောက္ပီး အေသးစိတ်ရွင်းျပ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ်
« SAP Predictive Analytics Customer Relationship Management »